I-Nest Tree House kaNowa - I-Airbnb
I-Nest Tree House kaNowa
Vandiperiyar, Kerala, i-India
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Abraham
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Abraham izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Noah's Nest yindlu yezihlahla esanda kwethulwa esendaweni efanayo nekhaya elidumile elithi "Morley's Place". Leli gumbi eliphephile nelikhululekile elisezingeni eliphezulu lesihlahla linombono omangalisayo womfula iPeriyar nezintaba ezimbozwe itiye eliluhlaza eliluhlaza kanye namahlathi anezinkuni.
Cabanga ngendawo entanta esibhakabhakeni, indawo ephakeme, lapho uphephile, lapho ubuka khona izihlahla zinyakaza emoyeni.
Cabanga njengendawo enokuthula, cabanga ngendawo lapho kungekho muntu ongakucasula, lapho kungekho muntu ongakubona, nalapho ungeke ukuthole muntu.
Zibone ngeso lengqondo ucashe emaqabunga aluhlaza, ubukele ngasese izimvemvane ezimibalabala zindiza zidlula, kuyilapho uhlezi nezinyoni ezinhle zasentshonalanga, endlini ebanzi, efihlekile yesihlahla, yobuhlanga neyokuqala, efakwe zonke izinsiza zesimanje.
Cabanga ngombono omangalisayo ovela endlini yesihlahla - i-River Periyar endaweni yayo eyintaba engakaze ibonakale igeleza ngokuhamba kwesikhathi amatshe agugile, izintaba ezidlule zezingadi zetiye ezilungiswe kahle kanye ne-Kayak enjabulweni ephelele emfuleni i-periyar.
ubusuku obungu-7 e- Vandiperiyar
Suka esiphithiphithini sedolobha futhi ube nomuzwa oyingqayizivele wempilo ezinsukwini ezimnandi zakudala.
Hlola ezinye izinketho ezise- Vandiperiyar namaphethelo